Rehefa vita ny lamesa no nanazava ny mompera nitarika ny fotoana, fa niainga avy ao amin’ny tranona mpitandro ny filaminana iray ao atsinanan’ny Fiangonana ilay fofona manempotra.
Nolalaovin’ny zanak’io mpitandro ny filaminana io ny lakrymôzena tao an-tranony (?), ary latsaka tao an-tokontanin-dry zareo izany ka nipoaka. Niparitaka ny setroka, ka io no tafiditra tao am-piangonana rehefa tsofin’ny rivotra ary nanempotra ny mpiangona.
Maro no mametra-panontaniana nanoloana ity tranga teny amin’ny EKAR Maria Mpanampy Soanierana ity hoe, ara-dalàna ve ny fisian’izany grenady lakrymôzena any an-trano izany, ahoana ny fanaraha-maso azy ireny ?
Soa fa tsy nisy aina nafoy na naratra fa mba hafahafa ihany izany grenady tonga eny ampelan-tanan'ny ankizy toy ny kilalao izany.